Screen Keyboard on Desktop !!! Portable ကီးဘုတ်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်…(10Mb) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Screen Keyboard on Desktop !!! Portable ကီးဘုတ်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်…(10Mb)
Posted on November 29, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မိမိကွန်ပြူတာမှာ Keyboard အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကိုဆောင်ထားပါ။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်ကြိုက်သလိုရိုက်လို့ရပါတယ်။ On-Screen လေးဖြစ်တဲ့အတွက်Taskbar မှာရှိနေမှာပါ။လိုတဲ့အချိန်ခေါ်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ စာရိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ Auto ကီးဘုတ်လေးပေါ်နေတာပါ။ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာလည်း အရင်သုံးနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။Shift+Ctrl နှိပ်ပြောင်းရုံပါပဲ။ Screen Capture လေးပါ ပါတဲ့အတွက်ပိုအဆင်ပြေါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ကာလာဒီဇိုင်းကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကီးဘုတ်အတိုင်းပါပဲ။အောက်မှာနမူနာကြည့်ပါ။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။မြန်မလိုပြောင်းလိုက်ရင်တော့ ကီးဘုတ်မှာမှာ မြန်မာလိုတော့ မမြင်ရပါဘူး။အတုံးတွေဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကစာလုံးတွေရဲ့ အထားအသိုကိုမှတ်မိရင်ရပါပြီ။ စာရိုက်လိုက်ရင်မြန်မာလိုထွက်လာပါတယ်။ အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပြီးတော့တစ်ခုပိုကောင်းတာက Gtalk မှာလည်းစာရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ Icon လေးကအဆင်သင့်နေပါတယ်။ Icon Keyboard လေးက Taskbar မှာအမြဲရှိပါတယ်။
Keyboard ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆွဲသာထားလိုက်။ ပြီးတော့ ကလိကြပေါ့ခင်ဗျာ…
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ www.mm-knowledge.com နည်းပညာမြို့တော်
← 1CLICK DVD Copy Pro 4.3.1.6 Multilanguage	မြန်မာဖောင့် မျိုးစုံ နှင့် အခြားသောအလှဆင်နိုင်သည့် Font ပေါင်းများစွာ →
2 thoughts on “Screen Keyboard on Desktop !!! Portable ကီးဘုတ်အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်…(10Mb)”	hlawin11711 says:	November 29, 2013 at 4:58 pm	Hi,bro! How to see Myanmar font in this Screen Keyboard? I have already installed Zawgyi font, but couldn't see it on that screen keyboard. please tell me how to do it, thanks!
Reply	hlawin11711 says:	November 29, 2013 at 4:58 pm	Hi,bro! How to see Myanmar font in this Screen Keyboard? I have already installed Zawgyi font, but couldn't see it on that screen keyboard. please tell me how to do it, thanks!